ỊTỌLITE ​​ỊNTANETỊ NA NTANETỊ WI-FI NETGEAR JWNR2000 - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ịtọlite ​​Ịntanetị na ntanetị Wi-Fi NETGEAR JWNR2000
Anyị ga-ekweta na ndị na-eme njem NETGEAR adịghị ewu ewu dịka D-Link, mana ajụjụ gbasara ha na-ebili n'oge. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha ihe ntanye nke NETGEAR JWNR2000 rawụta na kọmputa na nhazi ya maka ịnweta Ịntanetị.
Ijikọ na kọmputa ma banye ntọala
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya tupu ị hazie ngwaọrụ ahụ, ịkwesịrị ijikọ ya ma tinye ntọala ahụ. Mbụ, ịkwesịrị ijikọta ọbụlagodi otu kọmputa na ọdụ ụgbọ mmiri LAN nke rawụta site na eriri nke bịara na router. LAN ọdụ ụgbọ mmiri dị otú ahụ na-acha odo odo rawụta (lee nseta ihuenyo n'okpuru).
Ejiri eriri USB nke onye na-eweta ọrụ na eriri na-acha anụnụ anụnụ nke router (WAN / Internet). Mgbe nke ahụ gasị, gbanye router.
NETGEAR JWNR2000 - anya azụ.
Ọ bụrụ na ihe niile gara nke ọma, ị ga-achọpụta na kọmputa ahụ ejikọrọ na USB site na eriri na router ka a ga-egosi gị akara ngosi - a ga-arụ ọrụ netwọk mpaghara n'enweghị ohere ịntanetị.
Ọ bụrụ na ị dee na enweghi njikọ, ọ bụ ezie na rediregharị agbanwuru, ọkụ na-enwupụta na ya, kọmputa ejikọrọ ya - wee hazie Windows, ma ọ bụ kama nkwụnye netwọk (ọ ga-ekwe omume na ntọala ochie nke netwọk gị ka dị irè).
Ugbu a ị nwere ike ịmepe ọ bụla nke ihe nchọgharị ndị arụnyere na kọmputa gị: Internet Explorer, Firefox, Chrome, wdg.
Na nbanye adreesị, tinye: 192.168.1.1
Dị ka paswọọdụ na nbanye, tinye okwu: admin
Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, ọ ga-ekwe omume na onye nrụpụtara na-edozi ndabara ndabara site n'aka onye (dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike "ịchọọ" ntọala mgbe ị na-elele ahịa ahụ). Iji tọgharịa ntọala - na azụ nke onye na-rawụta ihe nwere bọtịnụ RESET - pịa ya ma jide 150-20 sekọnd. Nke a ga-edozi ntọala ma ị nwere ike ịbanye.
Site n'ụzọ, mgbe mbụ ị jikọọ, a ga-ajụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ọkachamara ntọala ntọala. M na-atụ aro ịhọrọ "ọhụụ" ma pịa "ọzọ" ma hazie ihe niile onwe gị.
Ntọala Ịntanetị na Wi-Fi
N'aka ekpe na kọlụm na mpaghara "nwụnye", họrọ "ntọala ntọala".
Ọzọkwa, nhazi nke onye rawụta ga-adabere na iwu nke netwọk ISP gị. Ị ga-achọ ntinye maka ịnweta netwọk, nke ị ga-agwarịrị mgbe ị jikọtara (dịka ọmụmaatụ, ndepụta na nkwekọrịta na mpaghara niile). N'ime akụkụ ndị ọzọ m ga-akọwa: ụdị njikọ (PPTP, PPPoE, L2TP), nbanye na paswọọdụ maka ịnweta, DNS na adreesị IP (ma achọrọ).
Ya mere, dabere na ụdị njikọ gị, na taabụ "Onye na-ahụ maka ọrụ Ịntanetị" - họrọ nhọrọ gị. Ọzọ, tinye paswọọdụ na nbanye.
Ọtụtụ mgbe ọ chọrọ ka ezipụta adreesị nkesa. Dịka ọmụmaatụ na Billine ọ na-anọchite anya ya vpn.internet.beeline.ru.
Ọ dị mkpa! Ụfọdụ ndị na-enye gị ntinye adreesị MAC mgbe ị jikọọ na Ịntanetị. Ya mere, jide n'aka na ịme ka "iji adreesị MAC nke kọmputa" mee ihe. Isi ihe ebe a bụ iji adreesị MAC nke kaadị netwọk gị site na nke mbụ ị jikọọ na Ịntanetị. Maka ozi ndị ọzọ banyere ntinye nyocha CEM, pịa ebe a.
N'akụkụ ahụ nke "nrụnye" e nwere taabụ "ntọala wireless," gaa na ya. Ka anyị tụlee ihe ị chọrọ ịbanye ebe a.
Aha (SSID): ihe di oke mkpa. A chọrọ aha ahụ ka ị nwee ike ịchọpụta netwọk gị ngwa ngwa mgbe ị na-achọ ma jikọọ site Wi-Fi. Karịsịa karịsịa n'obodo ukwu, mgbe ị na-achọ gị ịhụ netwọk W-Fi iri na abụọ - onye nke gị bụ nke gị? Naanị site aha na ịnyagharịa ...
Mpaghara: họrọ ebe ị nọ. Ha na-ekwu na ọ na-eme ka mma nke router. M onwe m amaghị otú ọ bụ obi abụọ ...
Channel: na-ahọrọ na-akpaghị aka, ma ọ bụ akpaaka. Edere nsụgharị dị iche iche nke ngwa ngwa na ụzọ dị iche iche.
Ụdị: n'agbanyeghị ike ịtọ ọsọ gaa 300 Mbps, họta nke akwadoro ngwaọrụ gị nke ga-ejikọ na netwọk. Ọ bụrụ na ị maghị, ana m akwado ịnwale, malite na opekempe 54 Mbit / s.
Ntọala nchebe: nke a bụ ihe dị mkpa, n'ihi na ma ọ bụrụ na izochighị njikọ ahụ, ndị agbata obi gị niile ga - enwe ike ijikọ ya. Na ị chọrọ ya? Ọzọkwa, ọ dị mma ma ọ bụrụ na okporo ụzọ enweghị njedebe, ọ bụrụ na ọ bụghị? Ee, ihe ọ bụla onye ọ bụla na-achọghị ka ọ rụọ ọrụ na netwọk. Ana m akwado ịhọrọ ụdị WPA2-PSK, ugbu a bụ otu n'ime ihe kachasị nchebe.
Okwuntughe: tinye paswọọdụ ọ bụla, n'ezie, "12345678" adịghị mkpa, dị oke mfe. Site n'ụzọ, rịba ama na paswọọdụ kachasị oke ọbụla bụ ihe odide asatọ, maka nchekwa gị. Site n'ụzọ, na ụfọdụ ndị na-agagharị agagharị ị nwere ike ịkọwa mkpụmkpụ karịa, NETGEAR bụ incorruptible na nke a ...
N'ezie, mgbe ị na-azọpụta ntọala na ịmalitegharia ihe ntanetị, ị ga-enwe Intanet na netwọk Wi-Fi na-enweghị ikuku. Gbalịa jikọọ na ya site na iji laptọọpụ, ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ikekwe ị ga-achọ otu isiokwu na ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na e nwere netwọk mpaghara ebe ị na-enweghị Intanet.
Nke ahụ bụ ihe niile, ọdịmma niile ...